Tsy trano fivarotan-tena, mpivaro-tena ary zava-mahadomelina ihany -Amsterdam koa no tanàna mety indrindra eto an-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Tsy trano fivarotan-tena, mpivaro-tena ary zava-mahadomelina ihany -Amsterdam koa no tanàna mety indrindra eto an-tany
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • LGBTQ • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Satro-boninahitra tanàna mety indrindra eto an-tany i Amsterdam
Tsy trano fivarotan-tena, mpivaro-tena ary zava-mahadomelina fotsiny ihany - i Amsterdam koa no tanàna mendrika indrindra eran-tany misy olona ambony indrindra miasa am-pitoerana, ary koa fanatika fanatanjahan-tena marobe.
Tsy mora foana ho an'ny mponina an-tanàna ny mijanona ho mavitrika.
Raha ny filazan'ny WHO, maherin'ny ampahefatry ny mponina eran'izao tontolo izao dia tsy miasa.
Fikarohana vaovao nataon'i Reebok no nanambara fa any Amsterdam no fonenan'ny olona matanjaka indrindra.
Ilaina amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, ny fampihetseham-batana dia naseho ho antony lehibe hiadiana amin'ny COVID-19. Ny fanadihadiana amerikana vao haingana dia nilaza fa ny tsy fisian'ny fampihetseham-batana dia mety mihoatra ny avo roa heny noho ny mety ho fahafatesan'ny coronavirus.
Ora bisikileta any Amsterdam
Na izany aza, ho an'ny mponin'ny tanàna sy ny fomba fiainany mipetrapetraka dia tsy mora foana ny mijanona ho mavitrika. Araka ny World Health Organization (OMS) maherin'ny ampahefatry ny olon-dehibe eran'izao tontolo izao dia tsy miasa.
Fandalinana vao haingana nataon'i Reebok dia nanadihady tanàna maherin'ny 60 manerana an'izao tontolo izao mba hampahafantarana ireo tanàna miasa indrindra eto an-tany.
Ny fandinihana dia mifototra amin'ny karazana fitambarana fahasalamana sy fahasalamana mifototra amin'ny haavon'ny asa tsy ampy, ny isan-jaton'ny mpikambana gym, ny isan-jaton'ny fampiasana bisikileta ary ny refy momba ny tontolo iainana fanampiny.
Maneran-tany, 28% ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra no tsy nihetsika firy tamin'ny taona 2016. Araka ny famaritan'ny OMS dia midika izany fa tsy nampihatra "farafaharatsiny 150 minitra nanatanjahana antonony, na 75 minitra fampihetseham-batana mahery vaika isan-kerinandro".
Ireo firenena manana fidiram-bola dia voakasik'ity fironana ity indrindra noho ny fihanaky ny asan'ny birao, fa ny fampihetseham-batana dia tsy midika hoe mandany fotoana be dia be ao amin'ny gym.
Saingy, misy tanàna sasany misitraka tontolo iainana mety kokoa ho an'ny fahasalamanana noho ny hafa, noho ny kalitaon'ny rivotra, ny habaka maintso ary ny gym mora vidy.
Topazo maso ny lisitry ny tanàna 20 festest eto ambany:
Cities firenena Taham-pitomboana (haavon'ny firenena) Vidin'ny mpikambana ao amin'ny gym isam-bolana Mandeha bisikileta hiasa ny olona Haavo ny fampihetseham-batana tsy ampy (firenena) Ny isan-jaton'ny habaka maintso ampahibemaso % ny mponina ao amin'ny firenena izay mankao amin'ny gym
1 Amsterdam Ny Netherlands 20.40% € 41.87 45.90% 27.2 13.00% 17.40%
2 Copenhagen Danemark 19.70% € 38.38 40.00% 28.5 25.00% 18.90%
3 Helsinki Failandy 22.20% € 40.71 14.00% 16.6 40.00% 17.20%
4 Oslo Norvezy 23.10% € 44.19 5.90% 31.7 68.00% 22.00%
5 Valencia Espaina 23.80% € 30.24 13.00% 26.8 11.70%
6 Marseille Frantsa 21.60% € 27.91 6.10% 29.3 39.30% 9.20%
7 Vienna Aotrisy 20.10% € 27.91 13.10% 30.1 45.50% 12.70%
8 Stockholm Soeda 20.60% € 47.68 12.20% 23.1 40.00% 22.00%
10 Madrid Espaina 23.80% € 40.71 2.00% 26.8 44.85% 11.70%
11 Prague Repoblika Tcheky 26.00% € 36.05 1.00% 31.1 57.00% /
12 Barcelona Espaina 23.80% € 44.19 10.90% 26.8 11.00% 11.70%
14 Zurich Soisa 19.50% € 77.92 10.80% 23.7 41.00% /
15 Vilnius Litoania 26.30% € 29.08 5.10% 26.5 46.00% /
17 Geneva Soisa 19.50% € 73.27 10.80% 23.7 20.00% /
20 Dublin Irlandy 25.30% € 39.54 11.90% 32.7 26.00% 10.50%
Paul any NY hoy:
September 20, 2021 ao amin'ny 04: 17
Tsy misy ady amin'ny zava-mahadomelina ary tsy misy ady ho an'ny Isiraely azo antoka fa manampy ny fahasalamana ara-bola sy ara-tsaina ao amin'ny firenena.